Dhacdadii Koowaad ee Grand Bahama Dhacdooyinka loo yaqaan 'shark' iyo doonyaha burburay ayaa loo qorsheeyay Julaay 19-23
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Dhacdadii Koowaad ee Grand Bahama Dhacdooyinka loo yaqaan 'shark' iyo doonyaha burburay ayaa loo qorsheeyay Julaay 19-23
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Sports • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Ku quus Grand Grand
Ku quusitaanka libaax badeedka jasiiradda Grand Bahama Grand Bahama Island
Grand Bahama lnown ee xeebteeda abaalmarinta ku guuleysatay, quusitaanka cajiibka ah iyo nolosha badda ee cajiibka ah, ayaa hadda lagu soo daray dhacdadii ugu horreysay abid ee 'Dive Grand Bahama Event', oo loo qorsheeyay July 19-23, 2021, ee Freeport, Grand Bahama
Dhiirrigelinta shark-biyo-furan iyo quusidda, socdaalka magaalada, iyo soo dhaweynta howlaha la qorsheeyay.
Dhacdadan xiisaha badan waxaa soo qabanqaabiyay Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas iyadoo lala kaashanayo Pelican Bay Resort, UNEXSO, iyo Bahamasair.
Ka qeybgalayaasha waxaa ka mid noqon doona Safiirada Bahamas Dive, quusayaasha maxalliga ah, iyo quusayaal shahaado ka haysta biyaha furan.
Munaasabada xiisaha leh ee shanta maalmood socotaa waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas (BMOTA) iyadoo lala kaashanayo Pelican Bay Resort, UNEXSO iyo Bahamasair waxaana ka soo muuqan doona Bahamas Dive Safiiro, qubaro shahaado ka haysta biyaha furan, iyo noocyo kala duwan oo maxalli ah.
Dad kala duwan oo ku soo biiraya on the Quusinta Dhacdada Grand Bahama waxay filan kartaa inay la kulanto biyo-furan laba haamood oo la habeeyay oo la xaqiijiyey oo ku wareegsan goobaha caanka ah ee Grand Bahama oo ay ku jiraan meelaha gacma-biyoodka gacmeed iyo derbiyada, reefs, iyo dolphin-ka iyo Kariibiyaanka kalluumeysiga kalluumeysiga. Marka lagu daro quusitaanka badan, kaqeybgalayaashu waxay sidoo kale la kulmi doonaan soo dhaweyn soo dhaweyn ah, booqasho magaalo iyo siminaar quus ah.
Sida laga soo xigtay Aram Betel, Dive Executive at BMOTA: “Grand Bahama, sanadba sanadka ka dambeeya, waxaa la siiyaa abaalmarinta 'Meel Wanaagsan ee Quusashada ah ee Kulammada Xayawaanka Weyn,' oo ay Qortay Chouba Divers Readers 'Choice. Meel kale oo loo maro ma jirto kala duwanaanta iyo waxqabadyada badan ee Grand Bahama, laga bilaabo godadkeeda buluugga ah ee cajiibka ah iyo nidaamyada godadka biyaha hoostooda ee adduunka ugu weyn ilaa xiisaha weyn ee Tiger, Hammerhead iyo Lemonhead shark.
Iyada oo ku saleysan baahida loo qabo iyo xiisaha kooxdayada tooska ah (Donna Ash iyo Deckery Johnson) oo ay ka heleen socdaalka, gaar ahaan kuwa kala duwan, oo dhammaantood diyaar u ah inay baxsadaan, dib u soo ceshadaan oo ay la kulmaan dabeecadda mar labaad, waxaan go'aan ku gaarnay inaan tan qabanno dhacdo aad u qaas ah. Kaliya maahan inay soo bandhigto wax soo saarkeena quruxda badan iyo halka aan u socono, laakiin sidoo kale waxay u soo saartaa dakhli dheeri ah jasiiradda, ”ayay tidhi Betel.
"Iyada oo ay ugu yar tahay helitaanka hoteelada hoteellada ee Pelican Bay, shaqaalaha ka shaqeeya UNEXSO iyo sidoo kale kuraas diyaaradeed oo qiimo jaban ku leh Bahamasair (lambarka xayeysiinta: 00MXD951), kaliya 40-ka nooc ee ugu horreeya ayaa awoodi doona inay ka qaybqaataan barnaamijkan," Betel ayaa tilmaamtay.